Labada Kuuriya Oo Saacadaha Soo Socda Yeelanaya Wadahadalo Heerkoodu Sarreeyo | Haqabtire News
Labada Kuuriya Oo Saacadaha Soo Socda Yeelanaya Wadahadalo Heerkoodu Sarreeyo
March 29, 2018 - Written by Warbaahinta Haqabtire
Pyongyang:-(HTN) Saraakiil ka kala socota Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa isu diyaarinaya in ay yeeshaan wadahadalo heerkoodu sarreeyo saacadaha soo socda.
Waxa ay ka wadaxaajoon doonaan shirwaynaha labada Kuuriya ee lagu wado in la qabto dabayaaqada bisha April.
Waxaa lagu wadaa in kulanka imika dhacaya lagu shaaciyo taariikhda uu dhacayo kulanka lagu wado in uu dhexmaro madaxwayne Moon Jae-in iyo Kim Jong Un kaasi oo ka dhici doona goobta militariga ka caagan ee labada dal.
Dhowr bilood uun ka hor, aragtida ah kulankii dhex maray saraakiil ka socotay waqooyiga kuuriya oo ay kula kulmeen dhiggooda koonfureed ayaa ahayd mid aan la malaysan Karin, haddase waxa ay noqotay dhacdo iska caadi ah.
Wadahadaladdaan ayaa looga gollahaa sidii loogu qaban lahaa ballan iyo sidii loo diyaarin lahaa arrimaha looga hadlayo kulanka labada hoggaamiye.
Kim Jong Un intii uu ku gudajiray booqasho lama filaan ah oo uu ku tagay shiinaha toddobaadkan horraantiisii waxa uu ku celiyay mar kale ballan qaadkiisii ahaa in uu baabi’in doono oo uuma meesha saari doono hubkiisa nukleerka.
Xukuumadda Kuuriyada koonfureed ayaa sheegaysa in tani ay noqonayso qodobka ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono ayadoo ay jiraan shaki badan oo laga muujinayo in hoggaamiyahan da’da yar uu si sahlan ku joojin doono hubkiisa.
Waxaa sidoo kale la rajaynayaa in kulanka u dhexeeya madaxweyne Moon iyo Kim Jong Un uu gogol xaar u noqon doono wada haddalo suuro gal ah oo dhex mara Madaxweyne Trump iyo hoggaamiyaha da’da yare ee Kuuriyada waqooyi.